Liva Andriamanantena · Jolay 2021 · Global Voices teny Malagasy
Liva Andriamanantena · Jolay, 2021
Nanomboka nandika tamin'ny 22 Marsa 2016 · 1965 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Liva Andriamanantena tamin'ny Jolay, 2021
Azia Atsimo 27 Jolay 2021
Na eo aza ny fihenan'ny isan'ny voromaherimpaty manerana an'i Azia Atsimo dia tafarina indray ireo vorona mpihaza tandindonin-doza any Nepal noho ny lalàna henjana kokoa sy ny tombokasa ataon'ny vondrom-piarahamonina.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Jolay 2021
Olona miisa 16 no maty rehefa nisy nanafika tamin'ny fiara voasesika baomba sy balafomanga ny masoivoho Amerikana tany Sana'a, Yemen. Tsy lavitra ny fipoahana ny bilaogera iray.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Jolay 2021
Taorian'ny hetsi-panoherana enim-bolana dia nesorina tamin'ny toerany ny rektora notendren'ny governemanta Melih Bulu tamin'ny didim-panjakana navoaka ny alina izay nambara tamin'ny gazety ofisialy.
Azia Atsinanana 19 Jolay 2021
"Natao hampanginana ny feontsika sy hanodinana ny tsindry ataon'ny vahoaka amin'ny trangam-pahafatesana any am-ponja tao anatin'ny volana vitsivitsy ireo fandrahonana atao amin'ny mpikatroka mafàna fo, mpanao gazety ary mpanakanto amin'izao fotoana."
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Jolay 2021
Manerana ny firenena no mety hahitana sarivongana tongolo gasy, akoholahy, hena baolina, tsindrin-tsakafo eo an-toerana, noa, tanimanga, ary ny maro hafa, manamarika izay mampalaza ilay faritany.
Azia Afovoany sy Kaokazy 15 Jolay 2021
Nanao fihetsiketsehana nanoloana ny Minisiteran'ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary ao Baku ny mpiaro ny tontolo iainana, nitanisa ny fandringanana ala mitohy sy ny fifanarahana fampanofana maharitra ny tany misy ala amin'ireo mpihazona tsy miankina izy ireo.
Nofoanana tao anatin'ny fanafihana mahery vaika ny diabem-pireharehana tao Tbilisi
Azia Afovoany sy Kaokazy 13 Jolay 2021
Diaben'ny Fahamendrehana, Diabem-pireharehana nokarakaraina tao Tbilisi no nofoanan'ny mpikarakara tao anatin'ny herisetra sy fanafihana ny mpikarakara ny hetsika sy ny mpanao gazety.
Emirà Arabo Mitambatra 10 Jolay 2021
(Lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2008) Re hatrany Dubai sy tany amin'ny firenena hafa ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra ny horohorontany tany Iran, nahatonga ireo mpiasa birao sy mponina an'arivony tao anatin'ny tranobe misy rihana maro hivoaka ho eny an-dalambe, hoy ny bilaogera. Namely teo akaikin'i Bandar Abbas ilay horohorontany manana...
Azia Atsinanana 07 Jolay 2021
"Miandry ny dom-baravarana fotsiny izahay rehetra. Indraindray ianao maheno olona miakatra amin'ny tohatra, ary toy ny hoe ho any aminao izy: manana izany fahatsapana izany foana ianao."